Ree Awdal u Adkaysan Waaye, Ciil iyo Gumaad Joogta ah – Rasaasa News
Ree Awdal u Adkaysan Waaye, Ciil iyo Gumaad Joogta ah
Borama, December 07, 2011 [ras] – Maamulka Somaliland oo ninba reerkiisii u noqday lagana cabsi qabo in uu dagaal xun ka dhex dilaaco beelihii Somaliyeed ee inta badan nabada ku wada noolaa. Somali oo dhan waxay ka qiiroonaysaa xumaanta iyo ciilka ka muuqda dadkan Somaliyeed.
Beesha Somaliyeed ee Gudabiirsi, ayaa dhibaato wayn waxaa ku haysa maamul beeleedka Isaaq. Waxaana mudo dheer ka taagnayd cabasho iyo biyo cantuugsanaan ku saabsan dilalka quudhsiga ah iyo dal boob joogtada ah ee beeshan Somaliyeed lagu hayo, maantase waxaa muuqata in talo faro ka baxayso wax Eebe u kala gooyaba.
Cuqaasha beesha Samaroon oo ciil badan wajiyadooda ka muuqdo ayaa saddex bari u qabtay beesha Isaaq in ay ku keenaan dadkii laayey marxuumiin saddex ah oo lagu dhex gawracay guryahooda iyaga oo hurda.
Galabta ayaa degmada Dila laga taagay calanka Awdal state, waxaana la gubay calanka Somaliland. Waxaana lagu balamay in maalinta bari ah calanka Awdal State laga taago magaalada Borama, waxaa kale oo la sugayaa in isla maalinta bari ah ay Borama yimaadaan madaxda dawlad gabaleedka Awdal state.
War lagama hayo waxa uu yeeli doono maamulka Somaliland, hadiise ay dhacdo in ay xoog ku muquuniyaan, waxaa laga yaabaa in beelaha Somaliyeed ay soo faragaliyaan.
Daawo Cabashada iyo Ciilka ka muuqda culimada iyo cuqaasha beesha Somaliyeed ee Samaroon.
Gabalada: Qorshaha Shanta Sanow Wax Noo Qabo
Video: Nin Haweenaydii uu Qabay Garaacday oo Jidka ku Jiidayso
Veterinary Punishment Law Enacted in Somali Region January 16, 2022
3 Children and Mother Die starvation in Kedaduma January 15, 2022
Ethiopia Releases Few Politicians January 8, 2022
Civilians Arrested in Ceel-Ogaden District for no Apparent Reason January 6, 2022
Mustafe Cagjar Says “People say there is a drought”! January 3, 2022
Dubad Saddened by The Drought in The Somali Region January 2, 2022
Veterinary Punishment Law Enacted in Somali Region
Jan 16, 2022 Rasaas
3 Children and Mother Die starvation in Kedaduma
Jan 15, 2022 Rasaas
Ethiopia Releases Few Politicians
Jan 8, 2022 Rasaas
Civilians Arrested in Ceel-Ogaden District for no Apparent Reason
Jan 6, 2022 Rasaas